« Mifampitantana 2020 »: hifampizara sehatra indray i Poopy sy i Njakatiana | NewsMada
« Mifampitantana 2020 »: hifampizara sehatra indray i Poopy sy i Njakatiana
Par Taratra sur 14/01/2020
Vaovao lehibe ho an’ireo mpankafy ! Afaka manamboatra ny fandaharam-potoana sahady izy ireo, satria fantatra fa anjaran’i Poopy sy i Njakatiana ihany ny « Mifampitantana » amin’ity taona ity.
« Mifampitantana ». Andiam-pampisehoana fikarakaran’ny Live Prod isan-taona izy ity. Ny tarika Tselatra sy ny tarika Kiaka ny tamin’ny taon-dasa. Njakatiana sy i Bodo tamin’ny 2018, ary i Bodo sy i Poopy ny taona 2017. Amin’ity taona ity kosa, fantatra fa anjaran’i Njakatiana sy i Poopy indray no manatontosa ny “Mifampitantana 2020”.
“Nisy ny fakan-kevitra nataonay, ka nivoaka tamin’izay fa anisan’ny fampiaraham-peo andrasan’ny maro ny an’i Poopy sy i Njakatiana”, hoy Ralalarison Tantely, tompon’andraikitrta voalohany ao amin’ny Live Prod. Tohin’ilay fampisehoan’i Poopy nokarakarain’izy ireo farany tao amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina, izay nahitam-pahombiazana ihany koa izany.
Hotontosaina ny alahady 15 marsa ho avy izao io fampisehoana miavaka io. “Efa anatin’ny fanomanana be izahay izao. Hivoaka tsy ho ela ny hira tambatra, izay entina hampahafantarana ny seho”, hoy hatrany ny nambaran’ny mpikarakara.
Tsy voalohany akory ity fiarahana an-tsehatra ity, ho an’i Njakatiana sy i Poopy. Efa tamin’ny taona 1989 izy ireo no nampiara-peo tao Antsahamanitra. Efa nisy ihany koa ny seho niarahana, 10 taona lasa izay. Tsy fifandimbiasana an-tsehatra fotsiny ny amin’ity “Mifampitantana” ity, fa hibahana ny fampiaraham-peo, ankoatra ny fanaovan’ny iray ny hiran’ny iray. Ho tazana eny an-tsehatra avokoa ireo mpikambana ao amin’ny tarika roa tonta.